Action or Reaction? – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ and tagged Dilemma, Expectation, future, Life, myanmar youths, storm, strength, wild force. Bookmark the permalink.
← ပဋိပက္ခကမ္ဘာကြီး, In the Hot Zones & Solo-Journalism
10 thoughts on “Action or Reaction?”
Republic | January 2, 2009 at 1:26 am
လာရောက်ဖတ်ရှုပါတယ် ၊၊ နှစ်သက်ဖွယ်ရာပါ ဗျာ
ကုမ်ရာသီသူ | January 2, 2009 at 7:41 am
မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Mr. Republic ဆီကိုလည်း အသံတိတ် လည်ပတ်ဖြစ်ပါကြောင်း။ 😀
eveningstar | January 2, 2009 at 4:21 pm
အေးဟာ အဲလိုဆိုတော့ ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့။ action mind ဖြစ်ဖို့တော့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။
ကုမ်ရာသီသူ | January 2, 2009 at 4:26 pm
သူငယ်ချင်း ဖိုးကြယ်၊ နင့် မျဉ်းဖြောင့်က ငါတို့ ထောင့်ချိုးကို အလင်းမရောက်ဘူးဟ။ အဲဒါကြောင့် ငါတို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အလောင်ခံပြီး လင်းပစ်လိုက်တာ။ စိတ်မရှိပါနဲ့ သူငယ်ချင်းရာ။ နားလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
Myo Win Thet | January 2, 2009 at 4:55 pm
very wonderful pin point to all respective person and lives who are gradually changing their mind-set day by day due to the world’s sickness.
ကုမ်ရာသီသူ | January 2, 2009 at 5:03 pm
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် comment ၀င်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါရှင်။ ပြောသလောက်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ တတ်သိနားလည်သူများက မပြောဖြစ်ကြသေးတာကို ၀င်ပြောကြည့်တာပါ။
MrDBA | January 20, 2009 at 3:28 pm
လာရောက်ဖတ်သွားတယ်။ မသိဘူးဗျာ ရေးနေတယ်ဆိုတာ။ ဖတ်စရာတစ်ခုတိုးသွားပြီဗျို့ ဆက်ရေးဗျာ အားပေးတယ်
ကုမ်ရာသီသူ | January 20, 2009 at 5:15 pm
Bro. DBA ကြီးရေ၊ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျိုး။ ပညာ မစုံတော့ ဒီလိုပဲ ကြုံရတွေ့ရတာတွေကို ပြန်ပြန်ဆားချက်ရသဗျ။ အားပေးတာ အထူး အားရပါကြောင်း။ (အကို့ဘလော့လည်း လာလည်မယ်။ အော်မယ်နော် 😀 )
ရွှေအောင် | January 21, 2009 at 1:45 am
ကုမ်ရာသီသူ | January 21, 2009 at 2:06 am
Cbox မထည့်တတ်သေးလို့ လာလည်သူများကို ဧည့်ခံရတာ အားနာပါကြောင်း၊ သူငယ်ချင်း ရွှေအောင်ရေ့။ ဘ၀တူတွေပဲဟာ။ စဉ်းစားတာ များပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ပြန်စဉ်းစားမနေနဲ့ဦး၊ အသက်ပါ ပျောက်သွားမှာစိုးလို့။ 😀